Korea: Antony fito hametrapetrahan’ny vehivavy anao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Febroary 2009 7:32 GMT
Vakio amin'ny teny Français, srpski, Español, বাংলা, македонски, English
Misy hafatra iray manintona milaza antony fito mahatonga ny lehilahy ho voapetrapetraky ny vehivavy rehefa miresaka fotoana sy manome torolàlana ihany koa ny amin'ny fomba tokony hataonao lehilahy hisorohana an'izay fahavoazana lehibe izay. Aza dia mino azy ity 100%. Tsy voatery ho marina foana mantsy ilay izy.
[…] Lehilahy iray manomana fihaonana miavaka na manolotra fanomezana avy hatrany dieny mbola fihaonana voalohany fotsiny.
Mampilendalenda ilay izy. Tsy hisy vehivavy hanilika fotoana miavaka toy izany. Alohan'ny rehetra, tsy maintsy any amin'ny fotoana sy toerana maha-mety azy no hanaovanao izany karazana fihaonana miavaka izany. Tandremo ny manararaotra tafahoatra azy ireo. Tehirizo ilay fiarahana miavaka ho amin'ny fotoana sy fanapahan-kevitra tena mavesa-danja indrindra. Dia tena ho maty lolo ireo vehivavy avy eo. Raha toa ka tanterahanao amin'ilay fihaonana voalohany iny ilay fiarahana miavaka, nefa tsy mbola fantatrao akory izay tena hevitr'ilay vehivavy momba anao, very fotoana fotsiny ianao. Mety tsy hampahazo aina azy izany. Mety hanafoka anao ireny vehivavy ireny. Raha vao voalohany no ihaonanao amim-behivavy iray, aza manao toy ireo voalaza ireo mihitsy. Aza manomana fanomezana izany.
Mieritrereta toerana mahafinaritra sy sakafo mafilotra rehefa hifanao fotoana.
Tafahoatra ny mety loatra indraindray ny fanomanan'ny lehilahy. Karohiny daholo io toerana mahafinaritra sy sakafo mampilendalenda rehetra io. Nefa ny zavatra tokony hatao dia ireo lehilahy mihitsy aloha no tokony handeha hanandrana ireny toerana ireny mialoha. Tsy fantatrao akory na dia ny lalan-kizorana aza. Mety ho fanina ianao hitady ireny toerana ireny. Raha hiodinkodina etsy sy eroa ianao, mety ho reraka ambony ihany ny vehivavy iray ka farany hieritreritra fa izay aleha mety daholo ho azy. Na dia toerana tsy dia malaza loatra aza no hainao, ento any amin'izay efa mahazatra anao izy ary dia tsy hahatsiaro vizana akory. Efa fiheverana tsara izany.
Manja ianao. Manja ianao. ventiventeso hatrany hatrany.
Tsy misy vehivavy tsy ho tia ilazana ny hamanjany izany. Saingy tsy tsara atao matetika loatra ary, alohan'ny hanaovanao izany, jereo tsara aloha hoe fotoana mety amin'izany ve sa tsia. Raha vantany vao mifanena amin'ilay vehivavy ianao, tonga dia atombokao amin'ilay paika antitra filazana fa hoe tsara tarehy izy ary nahoana no tsy misy lehilahy miaraka [babo] amin'izao endrika mahafatifaty izao. Mety ho raisin'ilay vehivavy ho mpanome lagy sy mpandrangitra ianao. Aza maika hamoaka ny fihetseham-ponao tafahoatra. Mahandrasa kely aloha. Tsy dia milay loatra raha tonga dia avelanao ho fantany avy hatrany fa potika aminy ianao.
Aza mihevitra hanao fahagagana.
Tsy dia ilaina loatra izany. Raha tsy i David Copperfild ianao, andraso fotsiny izay havoakan'ny karatra eo. Omen'ny vehivavy lanja foana ireo ezaka ataonao, fa tsy zavatra toy izany no hanomezany lanja na hahasarika azy aminao. Mety hiteny aza izy fa hoe mahatsikaiky ary tena manantalenta ianao. Nefa mety ho an-tendro-molotra monja izany. Koa tandremo, aza mihevitra any hanao fahagagana.
Raha hiteny ihany hoe ‘Ahoana ny hevitrao raha hifindra toeran-kafa isika,’ dia aleo tonga dia tsorina hoe ‘Ndao isika hifindra toeran-kafa.’
Na dia be haingitraingitra aza no fijery azy, mety tsy ho zavatra be filirony no tiany hohanina. Nefa mety ho noho ny fisavoritahan-tsainy dia mety ho tsy zavatra tsotsotra koa no hosafidiany. Raha hanontany ianao hoe ‘Inona no tianao hohanina?” Mety hamaly izy fa, ‘mety daholo izay hatao.’ Mba ho solon'ny fametrahana ny fanontaniana toy izany, inona no tsy hilazanao hoe ‘mahalala toerana iray mahafinaritra aho. Ka ahoana, tianao handramana?’ Rehefa mifindra toeran-kafa ianareo, tsaratsara kokoa raha hoy koa ianao hoe ‘Ndao isika hifindra toeran-kafa’ toy izay hoe ‘Hifindra hankany an-toeran-kafa isika?” Fomba fiady amin'ny firesahana daholo izany mba hisarihana ny vehivavy.
Asehoy fa olona nobeazina ianao.
Raha te-hamono lolo ireny vehivavy ianao, dia ilainao ny mahafantatra ny tena mahaliana azy sy ny zavatra ataony andavanandro. Efa fantatrao rahateo, be ny karazan'asa eto amin'ity tany ity ary ny asam-behivavy no tena misandrahaka be indrindra noho ny an'ny lehilahy. Na ny zavatra tiany koa aza dia maro lafy ihany koa. Raha mahita rirany kely ianao, dia tena manampy amin'ny fifampiresahana izay. Miaraka amin'izay, azonao entina daholo io karazan-dresaka rehetra io. Ny tsara indrindra dia ny fahalalanao ny mahaliana ilay mifanatrika aminao, amin'izay tsy hahamonamonaina ny resaka. Tokony hiezaka hitazona fahalalàna maro ianao noho izany.
Tokony hanana fialamboly iray mahaliana ianao farafaharatsiny.
Na dia tontolo mandreraka sy efa mandeha ho azy ary mankaleo aza no iainana, tena hafa mihitsy ny fifandraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny lehilahy tsy manana fialamboly mahaliana dia toy ny tany hay tsy azon-java-maniry hitrebonana akory, na iray aza. Raha tsy manana fialamboly mahaliana ianao, dia mazava ho azy fa tsy hahaliana ny sasany koa eo amin'ny fialamboliny. Afaka mamboly resaka milay be momba ny fialamboly ianao, nefa tsy voatery hanana firehana amin'izany fialamboly izany na hahatakatra ny fialambolin'ny hafa. Forony ny fialambolinao manokana. Ary ilaina koa ny mihaino ny an'ny sasany.